ပဲန်းရို့စ် လှေကား - ဝီကီပီးဒီးယား
ပဲန်းရို့စ် လှေကား (အင်္ဂလိပ်: Penrose stairs or Penrose steps) ကို မဖြစ်နိုင်သော လှေကား အဖြစ် အမည်တစ်မျိုးဖြင့် ခေါ်ဝေါ်နိုင်ကာ လိုင်ယန်နယ်လ် ပဲန်းရို့စ်နှင့် သားဖြစ်သူ ရော်ဂျာ ပဲန်းရို့စ်တို့က ဖန်တီးခဲ့သည်။ ပဲန်းရို့စ် တြိဂံ၏ မူကွဲတစ်ခုဖြစ်ကာ နှစ်ဖက်မြင် သဘောတရားဖြင့် ရေးဆွဲထားသည့် လှေကားအုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်း၌ လှေကားလေးခုပါဝင်ရာ လှေကားမှ တက် (သို့) ဆင်း ရာတွင် လှေကား အချင်းချင်း (၉၀) ဒီဂရီစီ ချိတ်ဆက်လျက် ရှိပြီး အဆက်မပြတ်သွားနိုင်သော ပတ်လမ်းပုံစံဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လူတစ်ဦးသည် ယင်းလှေကားမှ သွားလာလျှင် ထာဝရကြာမြင့်နိုင်၍ တက်သာတက်သွားသော်လည်း အမြင့်တစ်နေရာသို့လည်း ရောက်ရှိခြင်း မရှိနိုင်ပေက သုံးဖက်မြင် ယူးကလစ်ဒီယန် ဂျီဩမေထြီတွင် လုံးဝဖြစ်နိုင်မှု မရှိချေ။
၁၉၅၈ ဗြိတိသျှ စိတ်ပညာဂျာနယ်၌ ရော်ဂျာ ပဲန်းရို့စ်၏ ပဲန်းရို့စ် တြိဂံ ဟုခေါ်သော ဆောင်းပါးပေါ်တွင် အခြေခံကာ သားအဖနှစ်ဦးတို့က ၁၉၅၉တွင် နောက်ထပ်ရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါး၌ ဤအဆင်မပြတ် လှေကားအုံ ကို ပထမဆုံး သရုပ်ဖော်ထားသည်။ အမ် စီ အက်ရှာက နောက်တစ်နှစ်တွင် ပဲန်းရို့စ် လှေကားပုံ ကို ရှာတွေ့ခဲ့၍ ၎င်း၏ နာမည်ကြီး ပုံနိပ်ပုံဖြစ်သော Klimmen en dalen(အတက် အဆင်း) ကို ၁၉၆၀ မတ်လ၌ ဖန်တီးရေးဆွဲခဲ့သည်။ ပဲန်းရို့စ်နှင့် အက်ရှာတို့နှစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏ လက်ရာများအကြောင်းကို ထိုနှစ်၌ပင် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးအသိပေးခဲ့ကြသည်။ အက်ရှာက ထို့နောက် ၁၉၆၁တွင် ဤအကြောင်းအရာကို ပိုမိုချဲ့ထွင်၍ Waterval - ရေတံခွန် (အမ် စီ အက်ရှာ) ကို ရေးဆွဲ ပုံနှိပ်ခဲ့သည်။
မူရင်းဆောင်းပါတွင် ပဲန်းရို့စ်သားအဖသည် ထိုရေးဆွဲထားသော အဆောက်အအုံ၏ အပိုင်းတစ်ပိုင်းချင်းစီသည် လှေကားတစ်ခုချင်းစီကို သရုပ်ဖော်ပြခြင်းအဖြစ် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာရှိသည်၊ သို့သော် ဆက်သွယ်ထားမှုသဘောအရ ပုံကို တစ်ခုလုံးအနေဖြင့် ကြည့်လျှင် တစ်သမတ်တည်းမဟုတ်၊ အကြောင်းမှာ ညာရစ်ပုံစံဖြင့် ကြည့်ရှုပါက လှေကားများသည် ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဆင်းသွားမည်ဖြစ်၏ ဟူ၍ မှတ်ချက်ပြုသည်။
၁ ခေတ်ပေါ် ယဉ်ကျေးမှု ဖော်ပြချက်
ခေတ်ပေါ် ယဉ်ကျေးမှု ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]
ပဲန်းရို့ လှေကားသည် Inception ရုပ်ရှင်ကားတွင် နှစ်ကြိမ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဤအမြင်လှည့်စားမှု၏ ဝိရောဓိသဘောဖြစ်နေမှုကို ရုပ်ရှင်အတွင်းက အိပ်မက်ကမ္ဘာ၌သာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ရုပ်ရှင်၌ ဇာတ်လိုက်သည် ထွက်ပြေးရင်း လှေကားကို ဆင်းခဲ့သည်။ အရှိကမ္ဘာ၌ ဇာတ်လိုက်သည် ထွက်ပြေးမှု (အလိုက်ခံရမှု) ဖြစ်စဉ်တွင် အမြဲလိုလို လူဆိုး၏ ရှေ့တွင် ရှိနေသည်သင့်သည်။ သို့သော်လည်း ပဲန်းရို့စ် လှေကားအခန်း၌ ဇာတ်လိုက်မှာ နောက်ထပ်လှေကားကို ဆင်း၍ လူဆိုးကို အမီလိုက်နေကာ ဖမ်းမိသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Penrose & Penrose 1958, pp. 31–33
↑ Hallyn 2000, p. 172
↑ Ernst 1992, p. 72
↑ Harshbarger၊ Eric။ "The Never-Ending Stories: Inception's Penrose Staircase"၊ Wired၊ 2010-08-19။
Deutsch, Diana (July 2010). "The Paradox of Pitch Circularity". Acoustics Today6(3): 8–14. doi:10.1121/1.3488670. Retrieved on March 16, 2011.
Ernst၊ Bruno (1992)။ The Eye Beguiled: Optical Illusions။ Taschen။ ISBN 3-8228-9637-3။ CS1 maint: ref=harv (link)
Hallyn၊ Fernand (2000)။ Metaphor and Analogy in the Sciences။ Springer။ ISBN 978-0-7923-6560-0။ March 16, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ CS1 maint: ref=harv (link)
IllusionWorks (1997)။ Impossible Staircase။ 13 July 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ March 16, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Impossible objects: A special type of visual illusion" (1958). British Journal of Psychology 49: 31–33. doi:10.1111/j.2044-8295.1958.tb00634.x. PMID 13536303.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပဲန်းရို့စ်_လှေကား&oldid=703038" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။